राष्ट्रिय सहमतीमा जानका लागि दलहरुलाई प्रधानमन्त्रीको आव्हन - Samriddha Online
राष्ट्रिय सहमतीमा जानका लागि दलहरुलाई प्रधानमन्त्रीको आव्हन
समृद्ध अनलाईन ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १४:०४ मा प्रकाशित ( १ महिना अघि) ७९८० पाठक संख्या
काठमाण्डौं, जेठ ७ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सहमतीमा जानका लागि दलहरुलाई प्रधानमन्त्रीको आव्हन गरेका छन् । प्र्रधानमन्त्रीको सरकारी निवार बालुवाटाररमा आयोजीत पत्रकार सम्मलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
आफूले मार्ग प्रशस्त गरेकै आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार अर्को सरकार गठनको आव्हान गर्नुभएको प्रष्ट पारेका छन् । बालुवाटारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा प्रष्ट पारेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको आव्हान लगत्तै कृतिम र नाटकीय व्याख्या र टिप्पणी भएको उनले बताए । विश्वासको मत प्राप्त हुने अवस्था थिएन, फेरि जानु भनेकै उपधारा ५ मै जानुपर्ने थियो भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ, अहिले गठित हुने नयाँ सरकारले कसरी बजेट १५ गते ल्याउला ? हामीसँग समय धेरे छैन, आज ७ गते भइसकेको बताए । उनले विश्वासको मत लिने कर्मकाण्ड पूरा गरी फेरि पराजित भएर उपधारा ५ मा जाने समय नरहेकाले मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको हुँ, समयको हिसावले यो अपरिहार्य रहेको बताए ।
वैकल्पिक सरकार गठनकालागि आव्हान गर्न मन्त्रीपरिषद बैठकबाट निर्णय भएर गरिएको हो उनले बताए । प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउनुमात्र उद्देश्य अरुको देख्छुँ, त्यसैले मार्ग प्रशस्त गरिदिने निर्णय गरेको हुँ उहाँले प्रष्ट पारे । गत एक वर्षदेखि मुलुकलाई अस्थिर बनाउने प्रयास भएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीहरुको अस्वस्थ खेलको चक्रव्यूहका कारण सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नपाएको प्रष्ट पारे । कोभिड १९ जस्तो महामारीमा एकजुट भएर सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारलाई अन्य काममा अल्झाई राख्ने काम भएको बताउँदै उनल यस्तै अवस्था आउँछ भनेर मैले यसअघि संसद विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि पहल लिएको थिएँ तर सफल हुन सकिनँ । प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी हुन पनि नदिने, सरकारलाई काम गर्न पनि नदिने प्रबृत्ति दलका नेताहरुले देखाएको उनले चर्चा गरे । कोभिडकाबेला वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्दैन भने मलाई समर्थन गर्नुस् भनें तर उहाँहरुले फोहोरी खेल खेल्नुभयो । नीति विधि तोडेर, मर्यादा तोडेर, इमान जमान छाडेर, घेराबन्दी पारेर महाभारत लडाईमा अभिमन्युको हत्या गरेजसरी आफूलाई पनि दलका नेताहरु घेराबन्दीमा पारेको उनले टिप्पणी गरे ।
दलभित्रैबाट विपक्षीसँग मिलेर सरकार ढाल्ने कामलाई लोकतन्त्रमा के भनिन्छ ? प्रधानमन्त्री ओलीले जिज्ञासा थियोे । इतिहासमै कलङ्कित हुनेगरी सरकार ढाल्नका लागि गलत कामहरु गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । संसदमा विश्वासको मत लिन जाँदा ‘नाटक मञ्चन’ गरेको समेत आफूलाई आरोप लागेको उनले चर्चा गरे । कतिपय दलहरुले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने कुरा गरि रहेको अवस्थामा उनले आफुलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायर देखउन भन्दै अन्य दलहरुलाई चुनौती समेत दिएका छनद् । उनले बैकल्पिक सरकार वनाउनका लागि राष्ट्रपतिलेबाटो खुल्ला गरेको बाटोमा आउन पनि नसक्ने बाहिर बसेर कुर्लन मात्रले भुक्नेकुकुरले नटोक्ने भने जस्तै भएको बताए । यदी अन्यदलहरु वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सक्षम भएका खण्डमा आफुहरु उक्त सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्ने बताए । प्र्रधानमन्त्री ओलीले देशमा संकट परि रहेको अवस्थामा हामी उत्तेजनामा जाने वेला नभएकाले सबै दलहरुलाई आफुलाई समर्थन गर्न समेत आव्हन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले साझा सहमतीमा नआएको खण्डमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्यो भनेर भन्न पाउनु हुन्न समेत बताएका थिए । उनले दलहरु मिलेर जाँदा एक दिनको समय पर्याप्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बैकल्पिक सरकार गठन भएमा आफूले स्वागत गर्ने बताए ।
राष्ट्रपतिको आव्हानपछि दलका नेताहरुले यसअघि बहुमत जुटाउन नसकेपछि संविधानको धारा ७६ ९३० अनुसार प्रधानमन्त्रीमा पुनः केपी शर्मा ओली नियुक्त भएको र अहिले पनि अवस्था त्यही रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेको भन्दै मार्ग प्रशस्त गरेकाले सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले पुनः धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आव्हान गरेको गरेको बताइएको छ ।